Izikolo ezi-9 eziPhambili zeMed Med eCarlifonia 2022
January 14, 2022 Eze uThadayo
Ukuya kuso nasiphi na sezona zikolo zihamba phambili eCarlifonia kuya kunika abafundi bezonyango ukufikelela kwimfundo esemgangathweni yezonyango kunye nophando kunye nezixhobo zokwenza umsebenzi wokwenza umsebenzi.
ICarlifonia lelinye lawona mazwe aphezulu eMelika phantse nayo yonke into onokuyicela. Likhaya laseLos Angeles elihlala eHollywood, urhulumente aqhubeke nokuhlala iDisneyland, iUniversal Studios, kunye nezinye iindawo ezininzi ezinomdla. Ngaphandle kwezi ndawo zimnandi, iCarlifonia igcina ezinye zeyona yunivesithi zibalaseleyo kunye neekholeji, hayi eUnited States kuphela, kodwa nakwilizwe liphela.
Iiyunivesithi eziphambili ezinje nge-UCLA, i-UC Berkeley, iYunivesithi yaseStanford, njl. Zilapha. La maziko abambe iwonga lesizwe nelamazwe aphesheya ngenxa yeenkqubo ezisemgangathweni zemfundo abazinikelayo egubungela uluhlu lweendlela ezahlukeneyo. Ubungqingqwa belizwe laseCalifornia kunye namaziko ayo aphezulu ezithuba zasemva koqeqesho enza ukuba lukhetho oluphezulu phakathi kwabafundi bamanye amazwe nangona kubiza kakhulu ukuhlala apha.
Nokuba lishishini, amayeza, umthetho, ubugcisa, injineli, njl.njl. Kwaye enye yeenkqubo ezithandwayo abafundi abasuka ekhaya nakwamanye amazwe abaza kuzilandela kwiiyunivesithi zaseCalifornia ziinkqubo zonyango kunye nezamashishini.
Kutshanje sipapashe inqaku elithetha nge Iikholeji ezilungileyo eCalifornia zeshishini kwaye kule posi yebhlog sixoxa ngayo ezona zikolo zihamba phambili eCarlifonia kwaye nje ukuba awazi ukuba zithini na izikolo zangaphambi kokufunda eCarlifonia okanye indlela yokujoyina okanye yokufaka isicelo, eli nqaku likugubungele kwaye ngaphandle kokuqhubeka, masingene kuzo.
1 Yintoni iPre Med School eCarlifonia
2 Ungajoyina njani iSikolo sePre Med eCarlifonia
3 Ezona zikolo ziPhambili zeMed eCalifornia
3.1 1. University of Stanford
3.2 2. IYunivesithi yaseCalifornia -Berkeley
3.3 3. IYunivesithi yeSanta Clara
3.4 4. IYunivesithi yasePepperdine
3.5 5. IYunivesithi yase-Southern California
3.6 6. Ikholeji yasePomona
3.7 7. IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego
3.8 8. IYunivesithi yaseCalifornia, eLos Angeles (UCLA)
3.9 9. IYunivesithi yaseCalifornia, eSanta Barbara
Yintoni iPre Med School eCarlifonia
Izikolo zaphambi kweCalifornia zizikolo zonyango eCalifornia ezilungiselela abafundi abafuna ukwakha ikhondo kwicandelo lezonyango. Abanye babhekisa kuso njengesikolo sokulungiselela abafundi abaya kuqhuba isidanga se-MD okanye uGqirha kwezonyango kwicandelo elithile lezonyango. Ke, nokuba uyafuna ukuba ngugqirha wosapho, ugqirha wokubelekisa, ugqirha wotyando, ugqirha wezifo zengqondo, ugqirha wemithambo-luvo, njl.njl.
Okwenziwe sisikolo esenziwe kwangaphambili kukuba sakha ulwazi olusisiseko lomfundi kwicandelo lezonyango kwaye sibalungiselela icandelo lezonyango abafuna ukulilandela. Isikolo esenziwe kwangaphambili sinokubhekiswa kuso njengesidanga sokuqala kwaye nangona unganikwa isidanga sebhatshela awunakho ukuziqhelanisa naso de uye kwisikolo semed kwaye ufumane iMD.
Wonke umfundi ofuna ukungena kwicandelo lezonyango kufuneka aqale aye kwinkqubo yemed med.
Ungajoyina njani iSikolo sePre Med eCarlifonia
Ngokwesiqhelo, uya kujoyina isikolo sangaphambi konyango emva kwesikolo esiphakamileyo kodwa kuya kufuneka uthathe isigqibo malunga nokulandela isidanga sonyango ngelixa usesesikolweni samabanga aphakamileyo ukulungiselela kakuhle. Nje ukuba kugqitywe, kuya kufuneka uthathe iikhosi ezifanelekileyo zezifundo zesayensi ezibandakanya i-physics, chemistry, math, calculus, statistics, and English.
Oku kulandelayo kukhetha nasiphi na kwizikolo zangaphambili zaseCarlifonia ozikhethileyo kwaye ukuba awunangqondo engqondweni yakho esi sithuba siza kukunceda njengoko sidwelisile saza saxoxa ngokweenkcukacha ngezona zikolo ziphambili zakwimidolophu yaseCalifornia. Lungiselela uvavanyo lweMCAT, thatha uviwo, kwaye ungenise imibhalo ebhaliweyo, kunye nezixhobo zesicelo kwisikolo osikhethileyo.
Ezona zikolo ziPhambili zeMed eCalifornia
Apha kulapho ezona zikolo ziphambili zangaphambili eCarlifonia zichaziwe zaza zaxoxwa ngakumbi ngezantsi ngezixhumanisi zesicelo sokuba ufake isicelo ngokulula kuso nasiphi na isikolo osithandayo.
1. IYunivesithi yaseStanford
IYunivesithi yaseStanford ikwiiyunivesithi eziphambili kwihlabathi kwiinkalo ezininzi zokufunda, ngakumbi kunyango nakwinjineli. Ngaphandle kokuba yiyunivesithi ekumgangatho ophezulu ikwagcina isikolo esikwinqanaba eliphezulu sezonyango esilungiselela abafundi bezonyango abanqwenela ukuba ngabaphi na ogqirha abazikhethele bona. Sesinye sezona zikolo zihamba phambili eCalifornia kwaye iyaqhubeka nokuwonga abafundi nge-MD okanye i-Master of Doctor degree ekupheleni kwenkqubo yabo.
Abafundi abalungiselelwe iYunivesithi yaseStanford banombutho wangaphambi kweMed kunyaka ngamnye weklasi. Ngokusebenzisa iStanford Academic Advisory Programme abafundi baya kudibana nabacebisi bangaphambi kwempilo kunye nengcali yodliwanondlebe ehlekisayo ebakhokela ngokwamkelwa kunye nodliwanondlebe.
2. IYunivesithi yaseCalifornia -Berkeley
Eyaziwa ngokuba yi-UC, eBerkeley kwaye ihlala ikwisikhundla esiphakathi kwiiyunivesithi eziphambili kwinqanaba likazwelonke nakwamanye amazwe kunye naphakathi kwezona zikolo zihamba phambili eCalifornia. I-pre-med e-UC, eBerkeley ayisiyonto iphambili okanye incinci kodwa yindlela yangaphambi kobungcali ekhethwa ngabafundi xa belungiselela ikhondo lomsebenzi wobuchule bezempilo.
Nokuba yeyiphi na ephambili, bonke abafundi kulindeleke ukuba bagqibezele iikhosi ezifunekayo ngenxa yomsebenzi wabo wezempilo. Inkqubo ye-pre-med eBerkeley ibonelela ngokulungiselela izidanga zokuqala kwizikolo zonyango kunye nezinye ezinxulumene nezobugcisa kwaye zithumela inani elinomtsalane labafundi kwezi nkqubo zokuthweswa izidanga minyaka le.
3. IYunivesithi yaseSanta Clara
IYunivesithi yaseSanta Clara sesinye sezona zikolo zihamba phambili eCalifornia ezinedumela lokulungiselela abafundi ubugcisa kwicandelo lezonyango. Ngaphezulu kwabafundi abangama-200 abasele bequlunqwe kwinkqubo yase-Santa Clara yokuNgcebeleka kwezeMpilo baye baba ngabafundi kwizikolo zonyango ezingaphezu kwe-60.
Abafundi be-pre-med bayazibandakanya kwiiprojekthi zophando kunye namalungu e-faculty kwaye basebenze njengababhali bezonyango abalungiselela abafundi inqanaba elilandelayo lobuchwephesha babo.
4. IYunivesithi yasePepperdine
IYunivesithi yasePepperdine yasekwa ngonyaka we-1937 njengeyunivesithi yabucala yophando enxulumene nenkolo kwaye ibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zemfundo kunye neenkqubo zesidanga sokuqala kunye nezamabanga aphezulu. Iyunivesithi ikwiMalibu, eCalifornia, kwaye ibonelela ngeenkqubo eziphambili kwezilungiselelwe urhulumente.
I-Seaver College liziko eliphantsi kwesidanga sokuqala kwiYunivesithi yasePepperdine enikezela ngezifundo zangaphambi kwempilo kunye naphambi konyango kunye nezikhokelo. Inkqubo ecwangcisiweyo kwiKholeji yaseSeaver ine-89% yokwamkelwa kwenqanaba leenkqubo zonyango emva kokuthweswa isidanga okwenza ukuba ibe yimpumelelo kakhulu.
5. IYunivesithi yase-Southern California
I-USC sesinye sezona zikolo zihamba phambili eCalifornia kwaye ihlala ikwisikhundla esiphakathi kweyona yunivesithi ibalaseleyo eMelika nakwilizwe liphela. I-USC ibekwe eLos Angeles kwaye ngenxa yokuba iyunivesithi yabucala yophando iziko eli ligxile kugqirha, kwishishini, kubunjineli, nakwezinye iinkqubo ezijolise kuphando.
Ukugqitywa apha e-USC kwaziwa ngokuba yiPostbaccalaureate Premedical Programme eyilelwe ukulungiselela abafundi abanemfesane, abakrelekrele, kunye nabazinikeleyo ukulandela isidanga se-MD.
6. Ikholeji yasePomona
Isungulwe kwi -1887 kwaye ikwindawo yaseClaremont, eCalifornia, kwiKholeji yasePomona yikholeji yabucala yenkululeko kwaye inenkqubo ebalaseleyo yokulungiselela ehamba phakathi kwezona zilungileyo kurhulumente ezilungiselela abafundi bezidanga ukuba babe ziingcali kumacandelo abo ezonyango. Eliziko likwanenqanaba lokwamkelwa kwesikolo esiphakamileyo ngenqanaba eliphakathi le-85% phakathi kwabo bathweswe izidanga kwangaphambili.
Abafundi abalungiselelwe kwangaphambili ePomona banokufikelela kwizikhokelo ezininzi, iishiti zokusebenzela, kunye nezixhobo zokucwangcisa.
7. IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego
Eyaziwa ngokuba yi-UC San Diego kunye ne-UCSD kwaye yasekwa ngo-1960 njengeziko loluntu lophando lweyunivesithi enikezela ngaphezulu kwe-200 yezifundo zesidanga sokuqala kunye neenkqubo zesidanga sokuqala. Eliziko ikwayenye yezona zikolo ziphambili zangaphambi kokufunda eCarlifonia zixhobisa abafundi ngezakhono, ulwazi kunye noqeqesho lokugqibezela izidanga zabo zonyango.
I-UC San Diego inoluhlu olubanzi lweenkqubo zonyango ezibandakanya amazinyo, ikhemesti, ugqirha wamehlo, ubuhlengikazi, amayeza emfuyo, njlnjl. Isikolo sinezixhobo, izixhobo kunye nenethiwekhi yabacebisi ukukunceda ufike apho.
8. IYunivesithi yaseCalifornia, eLos Angeles (UCLA)
I-UCLA yenye yeeyunivesithi eziphambili kumazwe amanyeneyo kunye nokhetho oluphezulu phakathi kwabafundi abaninzi abafuna ukulandela iinkqubo zesidanga sokuqala kunye nezidanga zokuqala ezinje nge-MBA, amayeza, umthetho, ubunjineli, njl.njl. Izikolo zonyango ezidumileyo eUnited States nakwihlabathi.
Inkqubo yangaphambi kweMpilo e-UCLA yenzelwe abafundi abenza isidanga sokuqala ukulandela ikhondo lomsebenzi wobugcisa wokuxhasa abafundi kuhambo lwabo lokuba ngabafakizicelo abaphumeleleyo abazimiseleyo kwinkonzo nakwimpumelelo yezifundo.
9. IYunivesithi yaseCalifornia, eSanta Barbara
IYunivesithi yaseCalifornia, iSanta Barbara sesinye sezona zikolo zihamba phambili eCalifornia. Yayisungulwa kwi-1891 njengendawo yophando eyunivesithi yoluntu e-Isla Vista, eCalifornia. I-USCB okanye i-UC Santa Barbara, njengoko kuqhele ukubhekiswa kuyo kubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zemfundo ezikhokelela kwizidanga zokuqala kunye nezidanga.
Inkqubo yezonyango apha iphezulu-inotshi kwaye inokwaziwa kwilizwe liphela njengeyona iphambili, ezinye zeenkqubo zonyango zibandakanya ikhemesti, amayeza, amazinyo, amayeza, njlnjl. eyakha ulwazi lwakho olusisiseko kwaye ikulungiselela imfundo engqongqo yezonyango.
Ezi zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eCarlifonia onokufuna ukukhetha kuzo, amakhonkco anikiweyo aya kukunceda ufunde okungakumbi malunga neeprogram ezilungiselelwe kwangaphambili zesikolo ngasinye. Ukukhetha isikolo esilungiselelwe kwangaphambili ukuba uye kuyo yingxaki nokuba ngumzali okanye emntwaneni kwaye ngale posti yebhlog, uya kukhawuleza uyazi eyona ilungele wena.
Yeyiphi iyunivesithi yaseCalifornia eneyona nkqubo iphambili yangaphambi kokudibana?
IYunivesithi yaseStanford ineyona nkqubo iphambili ye-pre-med eCarlifonia kwaye ngelishwa akukho nzima ukungena kodwa isikolo sezonyango sinokukhuphisana kakhulu kwaye sinezinga eliphantsi lokwamkelwa, malunga ne-6%.
Izikolo eziBalaseleyo zeBiomedical zeZikolo ezingama-30
ezona zikolo zihamba phambili eCarlifonia
Post Previous:Iingcebiso eziGqwesileyo zokuSebenzisa iMidiya yoLuntu kwiMfundo yaseKholejini
Okulandelayo Post:Izifundo ezili-10 zeXesha elifutshane e-USA zokufumana umsebenzi